सियोना श्रेष्ठ दिइयो महँगो २५ करोडको औषधि, तर शरीरमा देखियो साइड इफेक्ट, राखियो आईसीयूमा – List Khabar
Home / समाचार / सियोना श्रेष्ठ दिइयो महँगो २५ करोडको औषधि, तर शरीरमा देखियो साइड इफेक्ट, राखियो आईसीयूमा
सियोना श्रेष्ठ दिइयो महँगो २५ करोडको औषधि, तर शरीरमा देखियो साइड इफेक्ट, राखियो आईसीयूमा
admin July 25, 2021 समाचार Leaveacomment 45 Views
एउटै औषधि कतिसम्म महँगो होला ? सुन्दा अपत्यारिलो लागे पनि बास्तविकता हो– जोल्जेन्स्मा नामको औषधिलाई २१ लाख २५ हजार अमेरिकी डलर (२५ करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी) पर्छ। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (एसएमए) रोगका लागि यो दिइन्छ। भैरहवाकी २२ महिने सियोना श्रेष्ठ उक्त औषधिबाट उपचाररत छिन्। यी सानी नानीको महँगो उपचार यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा छ। एलिना गुरुङ श्रेष्ठ र डा. सन्दिप श्रेष्ठकी छोरी एलिनाको दुबईमा उपचार भइरहेको छ।
Previous युथ फोर्सले माइतीघरमा गरेको फोहोर उठाउँदै डा.गोविन्द केसी नेतृत्वको समूह (भिडियो सहित)
Next देशका यी ठाउँहरुमा ‘भारी’ वर्षा हुँदै, यस्तो छ तीन दिनको पूर्वानुमान